Kwilizwe lezixhobo zokupakisha kunye neemveliso, ubuchule kunye nenkqubela phambili zihlala zikhokelela kubude obutsha bokuyila. Ezinye zeendlela zamva nje sele zithathe imarike ngesaqhwithi kwaye ziyatshintsha indlela iinkampani ezijonga ngayo izinto zokupakisha kunye neenkqubo zokuhambisa. Kufuneka iqatshelwe ...
Inkunkuma ayifuni, ayifuni: Ingakanani inkunkuma yokupakisha eninzi kakhulu?
Ukupakisha kufuneka: khawufane ucinge ilizwe elingenayo. Bekusoloko kukho uhlobo oluthile lokupakisha kwaye luya kuhlala lukhona, kodwa ngaba ikhona indlela yokuba siyeke inani longcoliseko kunye nenkunkuma eveliswa kwezi zinto zibalulekileyo zobomi? Uphi umgca wokuvuma ukwamkela ...
Ukupakishwa okucwangcisiweyo: amalinge entengiso exesha elizayo
Iinguqulelo zokupakisha ziye zanda kwaye zakhokelela ekugxininiseni okutsha ngokupheleleyo kwimarike iyonke, ngakumbi njengoko iinkampani zisebenza ukwenza iiphakeji zazo zibe nobungqongileyo kwindalo. Isiphumo esinye esiphume koku kukugxila okutsha ekupakisheni okunyibilikayo, kumzamo wokubonisa ukuba ...